Light Box ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက် China SMD2835 12V LED Rigid Bar သည် DiGuang
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > LED မီး Box ကိုအလင်းရောင် > တင်းကျပ်ဘား LED > အလင်းသေတ္တာများအတွက် SMD2835 12V LED မာကျောဘား
အလင်းရောင်မြင့်မားသော SMD2835 12V LED တောင့်တင်းဘားသည်အလင်းသေတ္တာအတွက်နောက်ကျောဘက်တစ်ထည်မီးအလင်းသေတ္တာကိုကြော်ငြာရန်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ DC 12V ဘေးကင်းလုံခြုံရေးထည့်သွင်းမှု၊ ၁.၆ မီလီမီတာအထူရှိ PCB ဘုတ်များ၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအပူဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အရည်အသွေးမြင့် LED ချစ်ပ်အဖြစ်အလင်းအရင်းအမြစ်၊ ပို၍ တူညီသော illumination ။2နှစ်အာမခံနှင့်အတူပါးလွှာအလင်းလမ်းညွှန်ပန်းကန်များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
မြင့်မားသောတောက်ပမှု SMD2835 12V LED သေတ္တာဘားသည်အလင်းသေတ္တာအတွက်အလင်းပြန်အားနည်းသောလျှပ်စစ်အရင်းအမြစ်အတွက်ဗို့အားသွင်းအားနည်းသောလုံခြုံရေးအချက်အလက်များနှင့်အတူဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ပါးလွှာသောအလင်းလမ်းညွှန်ပြားအလင်းရောင်အတွက်အထူးကျသောပါးလွှာသောဒီဇိုင်း။ SMD2835 LED ချစ်ပ်သည်အပူချိန်နိမ့်ပြီးသက်တမ်းရှည်သောကြောင့်၎င်းသည်ပါးလွှာသောကြော်ငြာတစ်ခုဘေးဘက်မီးအလင်းရောင်နှင့်ဆိုင်းဘုတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
တစ်ခုတည်းသောဘေးထွက်ကြော်ငြာသေတ္တာထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် LED တင်းတင်းသုံးသောအလင်းရောင်တစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးရှိသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်စိတ်ကြိုက်ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိသည်။
42pcs SMD2835 LED, စိတ်ကြိုက်
710 x3.5 x ကို 1.6
1.120 ဒီဂရီရောင်ခြည်ထောင့်ပိုမိုယူနီဖောင်း illumination;
2. အလင်းသေတ္တာများအတွက် SMD2835 12V LED တင်းတင်းဘား, နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်;
၄။ CRI မြင့်မားသည်။
1.2- 20cm အထူတစ်ခုဘေးထွက်ကြော်ငြာထည်အလင်း box ကို;
၂။ မီးပွိုင့်မီးပွိုင့်များ၊ ဆိုင်းဘုတ်များနှင့်အလှဆင်ထားသောအလင်းရောင်များစသည်တို့အတွက်ကြော်ငြာနိုင်သည်။
၃။ မင်းဆီက LED ပါဝါကိုလည်းဝယ်လို့ရပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ illuminated ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တွေကိုတစ်နေရာတည်းမှာဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပံ့ပိုးပေးသူများဖြစ်ပြီး LED power နဲ့အခြားထရန်ထရန်စတာတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
Diguang LED သည်အလင်းသေတ္တာအတွက် SMD2835 12V LED တင်းကျပ်သောဘားအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိဖောက်သည်များနှင့်ပူးပေါင်းပြီးအများစုမှာဥရောပ၊ မြောက်အမေရိက၊ အာရှနှင့်အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့တွင်တည်ရှိသည်။ ကျနော်တို့ LED ကိုတင်းကျပ်ချွတ်အလင်းရောင်နှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသည်။
hot Tags:: ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းခြင်း၊ ၀ ယ်ခြင်း၊ စက်ရုံနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိခြင်း၊ တရုတ်၊ စျေးပေါ၊ လျှော့စျေး၊ စျေးနှုန်း၊ အရည်အသွေး၊